Akwa na-ebunye Lightning Fast Mobile Social Akụkọ | Martech Zone
Mgbasa ozi dijitalụ eruola ebe nkwụsị. 50% nke ndị okenye na-arụsi ọrụ ike izere mgbasa ozi na mkpanaka na desktọọpụ na 47% ọzọ na-arụsi ọrụ ike izere mgbasa ozi ngwa. Ndị a bụ ọnụọgụ ndị na-anya ngwa ọrụ Wayin, Akụkọ gbasara mmekọrịta, ihe di nkpa maka ndi ahia ahia na ndi mgbasa ozi.
Taa, ọ bụrụ na ndị ọrụ na Instagram pịa ma ọ bụ swipe elu na a Akụkọ akwadoro, ọ na-ewekarị ihe zuru ezu sekọnd ise maka ika webụsaịtị n'ime ngwa ahụ. Ndị ọrụ ekwentị na-enweghi ndidi, nwee nkụda mmụọ wee laghachi na ngwa ahụ, ndị ụdị na-ata ahụhụ site na ịpị ala site na ntinye aka.
Akụkọ gbasara ọha bụ ngwa ọrụ na - enye ndị ahịa ohere ibupute ọdịnaya ejiri aha na ọsọ ọsọ yana nwa afọ n'ime ngwa ahụ, kama iji nwayọ were onye ọrụ were webụsaịtị. Maka ụdị, nke a na-eweta ntinye aka dị elu na ntụgharị na oku na-eme n'ime akụkọ ndị akwadoro.
Akụkọ Social mechara nye ndị ụdị ohere ịkwado ọdịnaya nkwado Akụkọ Instagram na Snapchat. Ngwaọrụ ahụ gbatịrị ahụmịhe akara na ọsọ ndekọ, nke na-eme ọdịnaya nkwado ka ọ bụrụ ezigbo ahụmahụ miri emi maka ndị ahịa. Maka ụdị, nke a na-eweta ntinye aka dị elu na ntụgharị na oku na-eme n'ime akụkọ ndị akwadoro.
Taa, ọ bụrụ na onye na-azụ ahịa pịa ma ọ bụ gbasaa na akụkọ nkwado, ọ na-eduga ha na ihuenyo oghere ebe ọ na-ewekarị sekọnd ise maka webụsaịtị ika iji bulie ngwa ahụ. Oge igbu oge na-egbochi ahụmịhe ndị ahịa na ụdị ahụ ma na-ahapụkarị ndị na-azụ ahịa nkụda mmụọ ịkwaga na ihe ọzọ. Akụkọ gbasara ọha na-edozi nke a site na ịnye ahụmịhe ọsọ ọsọ nke nwere ike ibudata ngwa ahịa ọdịnaya n'otu ntabi anya, na -emepụta ahụmịhe onye ọrụ na-enweghị ntụpọ. Richard Jones, onye isi oche nke Wayin
Tụkwasị na nke a, Akụkọ gbasara ọha nwere ikike dị elu iji tinye nsị, ajụjụ na ngwa ngwa ngwa ngwa na akụkọ, na-enye ndị ụdị ohere ịnakọta data PII nke mbụ maka ahụmịhe ahaziri iche, yana n'ikpeazụ, ọnụ ọgụgụ dị elu.
Demo Wayin Social Akụkọ
Tags: data mbụinstagraminstagram akụkọmobile mgbasa ozimkpanaka mkpanakaekwentị mkpanaaka akụkọakwụ ụgwọ mgbasa ozijichard jonesakụkọ snapchatakụkọ mmekọrịtaelekọta mmadụ akụkọAkụkọ akwadorowayin